Healthi Plus (1)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၄)
1. Kay Zin ဆရာရှင့် သမီးလေးက3လထဲက ဝမ်းယားမှောက်တာပါ။ ခုက5လထဲမှာပါ။ ညဘက်တွေအိပ်ရင် ပက်လက်သိပ်လို့မရဘူးဆရာ။ ဝမ်းလျားမှောက်ပဲအိပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတွေက လေးဘက်သွားပြီးမှထိုင်တာလားဆရာ။ ကလေးက လေးဘက်မသွားဘဲ...
ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ
* ဝမ်းလျှော၊ ဝမ်းပျက်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း… ဝမ်းပျက်ခြင်းသည် (Rota Vivus) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် အဖြစ်များပါသည်။ ၄င်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မိုးအကုန် ဆောင်းအကူးနှင့် မိုးဦးကျတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောအဖြစ်များပါသည်။ * အထက်လှန် အောက်လျှောဆိုတာ ဘာလဲ…...
ကလေးတက်လျှင် မိဘတိုင်း အရမ်းစိတ်ပူကြသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိ၍ ခြေထောက်နှိပ်၊ ခေါင်းမှုတ်ဖြင့် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိသည်။ အများအားဖြင့် အဖျားကြီးပြီး တက်သွားတတ်ကြသည်။ ဖျားလျှင် မိဘများက အအေးမိလို့ဆိုပြီး နွေးထွေးအောင် အင်္ကျီထူတွေ အများကြီးဝတ်ပေးတတ်သည်။ တစ်ခါတရံ ချွေးထွက်အောင်...
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၃)
1. Waiwai Hnin ကလေးက အမေနို့ရောနို့မှုန့်ရောတိုက်ပါတယ် အခုနို့ဗူးကိုမစို့ပဲလျှာနဲ့တွန်းထုတ်တယ် အမေနို့ပဲစို့တယ် အမေနို့က မလုံလောက်လို့လားမသိ ညဘက်ဆိုခဏအိပ်လိုက်ပြန်နိုးလိုက်နဲ့အမေနို့စို့လိုက်နဲ့ မနက်မှကြာကြာအိပ်တယ် ဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင့်။ မိခင်နို့ လုံလောက် မလောက်ဆိုတာ မိခင်ရဲ့ နို့ထွက်နှုန်း၊ ကလေးပုံမှန် သောက်နေကျ...
1. MgZaw Gyii ကလေးက ၈ရက်ရှိသေးတယ်။ နေ့ရောညပါ တအားနင်းတွေ ငိုနေလို့ ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ကလေး ငိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်… အောက်က Link မှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…...
1. Su Su ဆရာရှင့် သားလေးက6လပြည့်ုပီးပါပြီ။ ညဘက်အိပ်ရင် ထထငိုတယ်။ ခဏခဏငိုတယ်ဆရာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပြောပြပေးပါရှင်။ ၃လမှ ၆လအထိ ကလေးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးကို အောက်က ပေးထားတဲ့ Link...